Cilmiga bulshada – skolekassa.no
Fasalada 1aad ilaa 4aad
Fasalada 5aad ilaa 7aad
Fasalada 8aad ilaa 10aad
Bogga maadada cilmiga bulshada ee mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax naftaada iyo dadka kale ku saabsan, waqtiyada iyo goobaha.
Bogga maadada cilmiga bulshada ee mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax naftaada iyo dadka kale ku saabsan iyo inaad u fikirtid si ka fiirsi leh.
Bogga maadada cilmiga bulshada ee mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax naftaada iyo dadka kale ku saabsan, waqtiyada, goobaha, dimoqraadiyada, bulshada iyo inaad u fikirtid si ka fiirsi leh.
Bogga maadada cilmiga bulshada ee mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wadajirka, bulsho waareysa, dagaalka yo nabadda, xiriirka caalamiga.